Nin loo xiray in uu dilay canug hal sano jira - Worldnews.com
Nin loo xiray in uu dilay canug hal sano jira
Nin looga shakisan yahay in uu dilay wiil yar iskuna dayay in uu dilo gabar yar oo kale ayaa la xiray.
Labada ilmoodba waxay jireen min hal sano.
Bidhya Sagar Das oo 33 jir ah ayaa loo malaynayaa in uu yahay carruurta aabahood, waxaana loo raadinayay dhacdo ka dhacday guri ku yaalla Finsbury Park, oo
"in ay caddahay in ay arrintani masiibo tahay, ayna u tacsiyaynayaan qoyska uu dhibkani soo gaaray.
Janet Jackson oo 50 jir ilmo ku dhashay
Janet Jackson oo ah gabadh heesaa ah ayaa canugii u horeeyay oo wiil ah dhashay iyada oo 50 jir ah, sida uu shaaciyay qof u shaqeeya. War qoraal ah oo uu soo saaray ayuuna...
Lamaane 69 sano is qabay oo ku sugnaa gobolka Illinois ee dalka Maraykanka ayaa isku saacad geeriyooday sida ay qoyskoodu u sheegeen warbaahinta Maraykanka. Isaac Vatkin,...
Booliiska magaalada London ayaa sheegaya in baabuur la jiirsiiyay dad ka soo baxay masaajid ku yaala magaalada London xaley xili ay ka soo baxayeen salaada taraawiixda. Booliska ayaa xaqiijiyey dhimashada hal qof iyo...
Dawladda Filibiin ayaa si ku meelgaar ah uga joojisay muwaadiniinteeda in ay shaqo u doontaan Qadar ka dib markii ay dhawr dal oo Carbeed xiriirka u jareen dalkaas Khaliijka ku yaalla. Qadar waxaa faquuqay dalalkii ay dariska ahaayeen oo ku eedeeyay in ay taageerayaan Malayshiyaadka jihaaddoonka ah iyo Iiraan. In kabadan labo milyan oo reer Filibiin ah ayaa si sharci ah uga...
Tahriibayaal laga soo badbaadiyey badda Mediterranean
Markab samata-bixin ayaa ku soo xirtay dekedda Sicily, isagoo sida 606 tahriibe oo in ka yar laba maalmood ku jiray badda, meel u dhow xeebaha Libya. Waxay u kala dhasheen 20 dal oo Afrikaan iyo bariga dhexe ah. Kooxda gargaarka ee SOS Méditerranée ayaa sheegtay inay ku jireen 241 ilmood iyo 11 haween oo uur leh. In badan oo ah dumar ka yimid dalalka Afrika ee ka hooseeya...
Dhakhaatiir joogta caasimadda India ee Delhi ayaa kala fujiyey laba wiil oo dhakada madaxa isaga dhegganaa. Ilmaha oo ah laba jirro la kala yiraahdo Jaga iyo Kalia ayaa lagu sameeyey qalliin qaatay 16 saacadood, waxayna iminka ku jiraan qaybta dadka u baahan daryeelka aadka u sarreeya, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Koox dhakhaatiir ah oo 30 ka kooban ayaa qalliinka sameeyey,...